Minisitra Volahaingo Marie Therese: « Tsy azo ekena intsony ny gaboraraka sy ny kolikoly… » | NewsMada
Minisitra Volahaingo Marie Therese: « Tsy azo ekena intsony ny gaboraraka sy ny kolikoly… »
Tsy nitsitsy fitenenana. Nivoitra tamin’ny lahatenin’ny minisitra Volahaingo Marie Therese ny faran’ny herinandro teo tany Analanjirofo ny fomba fiasan’ny fanjakana manomboka izao.
“Ho hentitra amin’ny ady amin’ny kolikoly sy ny fahalovana ary ny gaboraraka ny fitondrana”, hoy ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa, i Volahaingo Marie Therese tany Fenoarivo Atsinanana, ao amin’ny faritra Analanjirofo, ny faran’ny herinandro teo. Nanteriny fa efa tafapetraka eo anivon’ny fiadidiana ny Repoblika ao Ambohitsorohitra izao ny birao hitondran’ny vahoaka fitarainana miaraka amin’ny porofo ho an’ireo mbola zatra lalan-dririnina sy manao kolikoly na koa manampatra fahefana. Ho an’ny sehatry fanabeazana manokana, efa misy ny lamina momba ny fampidirana ny mpampianatra Fram ho mpiasam-panjakana. Misy ny masontsivana napetraky ny minisitera ka tsy maintsy arahina, araka ny nambarany. “Miala tsiny ary mampitandrina izahay amin’ireo mbola manao kolikoly… Tsy azo ekena izany hoe vadin’ny sefo Cisco na olona tsy nampianatra izany no raisina. Ireo efa nampianatra 10 taona anefa tsy voaray…Hanova fomba fiasa isika”, hoy ihany izy.
Fifidianana, kitrotro, fandriampahalemana…
Ankoatra izany, nitondra ny toromariky ny governemanta ny minisitra Volahaingo Marie Therese amin’ny fanentanana ny olom-pirenena amin’ny hiatrehana ny fifidianana depiote, indrindra ireo feno taona, hisoratra anarana anaty lisi-pifidianana fa efa hifarana ny 15 feboary izao izany. Eo koa ny antso avo amin’ny tokony hanaovan’ny zaza vaksiny hiadiana amin’ny kitrotro. Ny hanamarihana manetriketrika ny 8 marsa…
Nampahatsiahy ny andraikitry ny mpitandro filaminana koa ny tenany amin’ny hiarovana ny vahoaka sy ny fananany, indrindra any amin’iny faritra Analanjorofo iny.
Tsiahivina fa nanokatra ny taom-pianarana 2018-2019 ho an’iny faritra iny ny minisitra ary nihaona tamin’ny vahoaka sy ny raiamandrenin’ny mpianatra ary koa ny fianakaviamben’ny fampianarana tamin’izao fitsidiham-paritra voalohany nataony izao.